Home मनोरञ्जन टाइगरकाे ‘बागी २’ कस्तो छ ?
२०१६ मा आएको टाइगर श्राफ र श्रद्धा कपूरको फिल्म ‘बागी’ लाई दर्शकहरुले अत्यन्तै मन पराएका थिए । अब २ वर्षपछि यसको सिक्वल रिलीज भएको छ, जसको नाम हो ‘बागी २’ । टाइगर र ‘बागी’ नाम बाहेक यसमा सिक्वल जस्तो केही पनि समानता छैन् । तर पनि एक्शनका पारखीहरुबीच यसमा देखाइएको एक्शनलाई लिएर चर्चा चलेको छ । हेरौं, टाइगरको एक्शनमा मनोरञ्जन पनि छ कि छैन ?
‘बागी २’ साउथको चर्चित फिल्म ‘क्षणम’ मा आधारित छ । गोवाकी बासिन्दा नेहा (दिशा पटानी) की ३ वर्षकी छोरी रियाको अपहरण हुन्छ । आफ्नी छोरी खोज्न नेहा आकाश–धर्ती एक गरिदिन्छिन् । तर उनको हातमा निराशाबाहेक केही पनि लाग्दैन । जब बाटो बन्द हुन्छ, नेहालाई आफ्ना ४ वर्ष पुरानो पूर्वप्रेमीको रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रानी (टाइगर श्राफ) को याद आउँछ । जो भारतीय सेनाका सिपाही बनिसकेका हुन्छन् र कश्मीरमा देशको सुरक्षा गरिरहेका हुन्छन् ।
रणवीर, नेहाको सहयोगका लागि गोवा पुग्छन् । कथा अगाडि बढ्दै जाँदा रणवीरका सामु कयौं आश्चर्यमा पार्ने कुराहरु आउँछन् । समयको खेल हेरेर उनी बीच–बीचमा अप्mनो प्रेम कथा पनि सम्झन्छन् ।
कथामा केही महत्वपूर्ण पात्रहरु अरु पनि जोडिन्छन् । जसमा नेहाका पति (शेखर), देवर सनी (प्रतिक बब्बर) दर्शन कुमार, भाडाको कार उपलब्ध गराउने उस्मान (दीपक डोबरियाल), डीआईजी शेरगिल (मनोज बाजपाई) र एसीपी एलएसडी (रणदीप हुड्डा) समावेश छन् ।
यिनीहरुमध्ये कसैको विश्वास गर्नु रणवीरका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ, जत्तिकै हराएकी बालिका रियाको खोजी गर्नु । यस्तो हो भने आखिरमा रणवीर यी कठिनाई र चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्छन ? उनी रियाको पत्तो लगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? यो प्रश्नको उत्तर जान्न तपाईले फिल्म हेर्नैपर्ने हुन्छ ।
भतिजाेबाट काकाकाे मृत्यु